Iindaba zesiXhosa ngo12:00, 26 eyeNkanga 2018 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa ngo12:00, 26 eyeNkanga 2018
Written by Ashia Nkontsa on 26/11/2018
Ulungiselelo lweendawo zokuqubha kwiphondo leNtshona Koloni
Isixeko sekapa sithi sikuqukumbele ukulungiswa kweendawo zokuqubha i-Glencairn kwakunye neSoetwater. Isebe lezolonwabo kwakunye nezitiya lithi uphuhliso lwezi ndawo zombini luquka ukwakhiwa kwamadonga amatsha nokuvalwa kwemibhobho emidala emazantsi ala machibi kananjalo nokulungiswa kweendawo ezilungiselelwe abantwana. Ukanti ilungu lekomiti kasodolophu kwezokhuselo umnumzana J.P Smith uthi uluntu malusoloko luthe qwa kananjalo lukhathalele imvelo…Uthi ininzi imali efakwe kule projekthi.
Bakruqukile abahlali base Bo-kaap
Uninzi lwabemi bommandla waseBo-Kaap luthi lukhathazekile ngenxa yokuba isixeko seKapa sivumela oosomashishini kwezolwakhiwo benze unothanda ngendlela eshiya abahlali bethe khunubembe. Kungokunje umbutho wabahlali i-Bo-Kaap Civic and Ratepayers Association uzakuthabatha inyathelo lomthetho ngakusomashishini wezindlu wakwaBlok. Lube ndlongo-ndlongo uqhankqalazo lwabahlali kwiveki ephelileyo ngethuban abahlali bebonakalisa ukuchasana nokwakhiwa kwezindlu zengqesho bememelela ukuban kugcinwe amafa emveli yabo. Ophuma kulo mbutho uJacky Poking uthi isixeko asibanga nakho ukukhusela abahlali bale ndawo yasezimbalini ikumathambeka eSignal Hill koosambuntsuntsu abajonge ukunsentsetha inqatha ngayo. Ukanti umhlohli kwiyunivesiti yaseKapa uLaura Nkuna Wenz uthi isixeko sinembali yokuhambisana noosomashishini abangabaphuhlisi bezakhiwo.
Kuqhuba imfazwe ye EFF ne DA kuTwitter
Umbhexeshi oyintloko weqela leDA umnumzana John Steenhuisen uthi kufuneka avunyelwe ukuba asebenzele abemi belizwe loMzantsi Afrika nokuba imfundo yakhe ikweliphi na izinga. Kuvele idabi likaTwitter phakathi kweEFF neDA emva kokuvela kweengxelo zokuba elona zinga liphezulu lemfundo kaSteenhuisen libanga leshumi. Usomlomo weEFF umnumzana Mbuyiseni Ndlozi ubhale esithi ukuba le nqeberhu ibingumntu ontsundu ngesele iyinto ekuhanjwa kucelwa impunga ngayo leyo kodwa ngoku kutyiwe tyum kuba kukhuselwa umntu omhlophe ngebala. uSteenhuisen uzikhusela ngelithi ukusebenza epalamente akudingi zinga lithile lemfundo.
UMongameli Ramaphosa uthi lizakuphela nya urhwaphilizo
Umongameli Cyril Ramaposa uthi urhulumente weli lizwe uzimisele ngamandla ukuphelisa nya urhwaphilizo. URamaposa ebethetha kwinkomfa yebhodi yamayuda eRhawutini esithi uyamxhasa umphathiswa uPravin Gordhan emva kokuhlaselwa kwakhe ngeentonga zomlomo liqela leEFF. Umongameli uthi uqinisekile ukuba eli lizwe liza kuliphumelela idabi lokuchasana norhwaphilizo kananjalo kufuneka zixhaswe iinkqubo ezifana nekomishoni kaZondo ephanda ukubanjwa ngobhongwana kukarhulumente weli lizwe nokufakwa epokothweni kwabaphathiswa ngooSambuntsuntsu abathile boongxowankulu.
Liyagxwala usapho lakwaChauhan ngokuSweleka ngedlela engaqondakaliyo kwentombi yalo
Unina kaSharisha Chauhan owabulawayo uxelele inkundla ephakamileyo yephondo leNtshona Koloni ukuba usapho lwakhe alukaxoli kukubulawa kwentombi yabo kwaye abasokuze baxole. uMinakshi Deva ebenikezela ubungqina bokuphembelela isigwebo kuvavanyo lwetyala lokubulala nokudlwengula kabini likaTaariq Phillips ofunyenwe emsulwa kwityala lokubulala ngenyanga yomsintsi koko wafunyanwa enamatyala amabini okudlwengula. uPhillips ekunye noChaulan obesakuba yintombi ancuma nayo babeyinxalenye yeqela labahlobo ababekumyhadala e-Le Blac Estate ePaarl ngomhla owandulela unyaka omtsha ngo2013 ngethuba uChauhan eqalisa ukugula ekuzeni kusa, nalapho aye wasiwa kwintente yesi sibini apho emva kwethuba bekunye noPhilipps aqalise khona ukuxhuzula. Le ntwazana yasiwa esibhedlele apho yabhubhela khona.
i-Bishophu yaseZCC ithi amalungu ayo mawavote ngengqiqo
Inkokheli yelona bandla likhulu kwilizwekazi i-Afrika uBishop Barnabas Lekganyane weZCC uthi abemi belizwe loMzantsi Afrika malungavumeli ukuqhathwa ngoosopolitiki ngezithembiso ezililize. OkaLikganyane ukuthetha oku ngelixa kanye xa amaqela ezopolitiko eququzelela ukonyulwa kunyaka ozayo. Umnene lo ebeyinxalenye yendibano yomthandazo ebeibanjelwe kwibala lezemidlalo i-FNB eRHawutini esithi i-ZCC ayisokuze ixelele amalungu ayo ukuba mawavotele owuphi umbutho koko kufuneka avote ngengqiqo egqibeleleyo.